सरकार भन्छः व्यापक काम गर्यौं, प्रतिपक्षी भन्छन्ः कामै गरेन– सत्य चाहिँ यस्तो हो ! « NBC KHABAR
सरकार भन्छः व्यापक काम गर्यौं, प्रतिपक्षी भन्छन्ः कामै गरेन– सत्य चाहिँ यस्तो हो !
देशवासीका नाममा प्रधानमन्त्री सम्बोधन
कार्यकालको एक वर्ष पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशबासीको नाममा सम्बोधन गरे । र, गरेका कामसँगै योजनाको फेहरिस्त सुनाए । प्रधानमन्त्रीले देशबासीका नाममा गरेको सम्बोधनमा दाबी गरेको सफलता र योजना यस्तो छः
संघीयता कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहसम्म शक्ति प्रत्यायोजना ग¥यौ,
कर्मचारी समायोजन र व्यवस्थापन सम्पन्नोन्मुख,
कानुन निर्माणमा उल्लेख्य सफलता,
लगानीमैत्री वातावरण बनेको छ,
पूर्वाधार विकासमा फड्को,
छिट्टै नेपालको पानीजहाज चल्छ,
कूटनीतिक सम्बन्धमा अभुतपूर्व सफलता,
पर्यटक आगमन बढ्यो, कृषि उत्पादन बढ्यो,
सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा खास कदम,
शान्ति सुरक्षा चुस्त,
सरकारले एक वर्ष अवधिमा व्यापक सुधारको काम गरेको दाबी गरे पनि प्रतिपक्षी दल, नागरिक र विश्लेषक, त्यो स्वीकार्न तयार छैनन् । आम बुझाई छ कि, शक्तिशाली सरकारले औसतभन्दा बढी केही गरेन ।
प्रधानमन्त्री हुनुअघि र भएलगत्तै तत्कालिन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समृद्धि, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सर्वजनिक सरोकारका विषयसँगै जनजिविकाका समस्या ‘रातारात’ समाधान गरिने झैं गरी आश्वासन बाँडेका थिए ।
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरणपछि गणतीय रुपमा थप शक्तिशाली बनेका प्रधानमन्त्री ओलीले छिमेकी दुई देशको भ्रमणपछि सरकारको गति बढाउलान् र जनअपेक्षाअनुसारको कामको थालनी होला भन्ने आमअपेक्षा थियो ।
सुरुवातमा ‘लय’ पक्रिन खोजेजस्तो देखिए पनि पछिल्लो समय ‘कुहिरोको काग’ झैं बन्दा सरकार प्रतिपक्षीको ‘घेराबन्दी’मा समेत पर्न थालेको छ ।
सुरुवातको केही समय सुधारका प्रयास गरेजस्तो देखिए पनि सरकारका पछिल्लो समयका गतिविधि र निर्णय विवादित बनेको छ । धेरैको बुझाईमा ‘गफको खेती’ मात्रै गरिरहेको ओली नेतृत्वको सरकार इतिहासकै कमजोर प्रतिपक्षलाई समेत विश्वासमा लिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
कानून निर्माणमा बर्तमान सरकारको प्रगति पर्याप्त नभए पनि सन्तोषजनक छ । संविधानले तोकेको डेडलाइन अनुसार २०७३ असोज ३ गते भित्र मौलिक हक सम्बन्धि कानून पास गर्नुपर्ने थियो ।
जसमा सरकार सफल भएको छ । सँगै सरकार संघीयताको मर्म अनुरुप अघि नबढेको आरोप लगोको छ । सिंहरवारको अधिकार स्थानीय तहको घर घरमा पु¥याउने उद्देश्यले सुरु गरिएको संघीयता कार्यान्वयन भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीमा शक्ति केन्द्रिकृत गर्न मात्रै लागि परेको आरोप छ ।
केन्द्र र प्रदेश सरकारबीच समन्वयको अभाव देखिएको छ । मुख्यमन्त्रीहरुले लगातार केन्द्र सरकारसँग गुनासोसँगै असन्तुष्टिले व्यक्त गरिरहेका छन् । मुख्यमन्त्रीहरु आफ्नो काम र क्षेत्राधिकार के हो ? भन्नेमा नै स्पष्ट छैनन् ।
तर, कर्मचारी समायोजन एवम् व्यवस्थापनमा सरकारले गरेको प्रयास सकारात्मक छ । तर, सरकार अलोतान्त्रिक भएको आरोप लागेको छ ।
दुई तिहाइको सरकार पाँच वर्षका लागि बनेको छ । सरकारको असफलतासँग प्रायः जोडिने राजनीतिक संक्रमण र अस्थिर सरकारजस्ता बाहाना अघिल्ला सरकारलाई जस्तो वर्तमान सकारलाई छैन । तर, अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्था सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम र महत्वाकांक्षी सपना भन्दा निकै टाढा छ । सरकारको कामलाई मूल्यांकन गर्ने खास आधार हो, आर्थिक परिसूचक ।
जसमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार नराम्ररी चुकेको छ । संसदको दुईतिहाई बहुमतसहित बनेको ‘शक्तिशाली’ र ‘स्थिर’ भनिएको सरकारले एकवर्ष अवधिमा अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको सत्य हो । तर, सरकारलाई सत्तोसराप गरेर मात्रै आर्थिक सूचक सुध्रने होइन ।
यसका केही खास कारण छन् । कमजोर सूचककावीच सरकार केही सकारात्मक कदमतर्फ अघि नबढेको भने होइन । सामाजिक सुरक्षा ऐन, श्रम ऐन, प्रधानमन्त्री रोगजार कार्यक्रमजस्ता विषयबाट केही सकारात्मक कदमको पहल गरेको देखिन्छ ।
श्रमिक र उद्योगीबीचको सम्बन्धमा सुधार ल्याउने सरकारको प्रयास छ । अर्कोतर्फ राष्ट्र बैंकको मासिक प्रतिवेदनलाई आधार मान्दा पनि सरकारको आर्थिक बृद्धिदरलाई कृषि अन्तर्गत धान उत्पादनले सघाउने देखिएको छ ।